liver cancer – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. အမေက အသည်းကြီးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အသည်းဆေးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆေးမပြတ်တမ်းကို တိုက်နေပါတယ် ဒေါက်တာ။ တစ်လတစ်ခါချိန်းပြီး အမြဲပြန်စစ်ရပါတယ်။ စိုးရိမ်တာက အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်သွားတတ်ပါလားရှင့်။ Hazelyu(FB) A. ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး...
Q. သည်းခြေမှာ ကျောက်တည်တာ အန္တရာယ်ရှိပါသလားရှင်။ ကျောက်ပျော်အောင် ဘာဆေးသောက်ရပါသလဲရှင့်။ အသက် ၆၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ယောက်အတွက် မေးမြန်းပေးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်ရှင်။ Daw Htwe Htwe Khin (FB) ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ပြုံးကြည် (ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်-ငြိမ်း) ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ အသည်းဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဌ ဖြေကြားသည်။...
မေး. ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အသည်းကင်ဆာဖြစ်တယ်ကြားလို့ ကြောက်နေပါတယ်ဆရာ။ မဖြစ်အောင် ဘာတွေဆင်ခြင်သင့်ပါသလဲ။ ဦးထွေးမောင်၊ ကျောက်မြောင်း။ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အသည်းကင်ဆာက အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုးရှိပြီး ကုသမှု မခံယူဘဲနေတာနဲ့ အရက် အလွန်အကျွံသောက်တာတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်...
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မုံရွာမြို့နေ ဦးစိုးသန်းသည် အသက် ၄၆ နှစ် အရွယ် ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာလတွင် အသည်းကင်ဆာ ဝေဒနာကို စတင်ခံစားခဲ့ရရာ ဆရာဝန်များက သုံးလသာ ခံတော့မည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သော်လည်း ငါးလအတွင်း ကင်ဆာဆဲလ်လုံးဝမတွေ့တော့ဘဲ သက်သာခဲ့သဖြင့်...